မြန်မာ့ပါတီနိုင်ငံရေးသမိုင်းနှင့် တိုင်းရင်းသားပါတီများ၏ အခန်းကဏ္ဍ ( The Roles of Ethnic Political Parties in the History of Myanmar’s Party Politics) – Federal Journal
မြန်မာ့ပါတီနိုင်ငံရေးသမိုင်းနှင့် တိုင်းရင်းသားပါတီများ၏ အခန်းကဏ္ဍ ( The Roles of Ethnic Political Parties in the History of Myanmar’s Party Politics)
မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံရေးသမိုင်းကို လေ့လာသည့်အခါ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ် ရွေးကောက်ပွဲများနှင့် လွတ်လပ်ရေးနောက်ပိုင်း ရွေးကောက်ပွဲများဟူ၍ (၂)ပိုင်းခွဲရပါမည်။ ကိုလိုနီခေတ်တွင် ဗမာပြည်မခေါ် Burma proper or Ministerial Burma ဗမာ၊ ကရင်၊ မွန်နှင့် ရခိုင် ဒေသတွင် ရွေးကောက်ပွဲကို (၆) ကြိမ်တိုင်တိုင် လေ့ကျင့် ကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည် (၁၉၂၂၊ ၁၉၂၅၊ ၁၉၂၈၊ ၁၉၃၂၊ ၁၉၃၆ နှင့် ၂၉၄၇ခုနှစ်)။ သို့သော် တောင်တန်းဒေသ(Frontier Areas) ဖြစ်သော ရှမ်း၊ ချင်း၊ ကချင်နှင့် သီးခြားဒေသဖြစ်သော ကယားပြည်နယ်များတွင်မူ ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်ရေးနောက်ပိုင်းမှာသာ ကျင့်သုံးခံစားဖူးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်မသားများက ရွေးကောက်ပွဲကို (၁၂)ကြိမ်ခန့် ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ရာတွင် တောင်တန်းသား များသည် (၆)ကြိမ်သာ ကြုံတွေ့ဖူးသေးပါသည် (၁၉၅၁၊ ၁၉၅၆၊ ၁၉၆၀၊ ၁၉၉၀၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ခုနှစ်)။ ဆိုရှယ်လစ် ပြည်သူ့ကောင်စီခေတ်က တစ်ပါတီရွေကောက်ပွဲ (၄)ကြိမ်ကိုတော့ မထည့်တွက်ပါ။
ထို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသားပါတီထဲမှာလည်း Ministerial Burma ထဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သော ကရင်၊ ရခိုင်နှင့် မွန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဆိုလျှင် လွတ်လပ်ရေးမတိုင်ခင် ၁၉၄၆ ၀န်းကျင်ကတည်း သက်ဆိုင်ရာလူမျိုး အလိုက် နိုင်ငံရေးပါတီ(သို့မဟုတ်)အဖွဲ့အစည်းများ အသီးသီး ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြပြီး ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံရေးမှာ နိုးနိုးကြားကြားရှိကြသည့်ကိုတွေ့ရသည်။ ကရင်ဗဟိုအဖွဲ့ချုပ်(ကေစီအို)၊ ကရင်လူငယ်များအစည်းအရုံး(ကေ၀ိုင်အို)၊ ရခိုင်အမျိုးသားကွန်ကရက်နှင့် မွန်အမျိုးသားအစည်းအရုံး စသည်ဖြင့်။ ၁၉၄၇ခုနှစ် ဧပြီလ (၉)ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သော တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲကို ကေအင်ယူ(ကေစီအိုအပါဝင်)က သပိတ်မှောတ်ခဲ့ရာတွင် ကရင်လူငယ်အဖွဲ့(ကေ၀ိုင်အို) က လက်မခံဘဲ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သေးသည်။
ထိုအချိန်တွင် တောင်တန်းဒေသမှာ ရွေးကောက်ပွဲမရှိသေးပေ။ သို့သော်လည်း ချင်း၊ ကချင်၊ ရှမ်းတို့သည် ၁၉၄၇ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ(ရ)ရက်တွင် တောင်တန်းသားများစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ကို ပင်လုံမှာ ဖွဲ့စည်းလျက် လက်တွဲလှုပ်ရှားလာခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ယင်းသည် ပင်လုံညီလာခံနှင့် လွတ်လပ်ရေးအကြို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုလောက်သာဖြစ်သောကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ ပေါ်ပေါက်လာသော ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံရေးအထိ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပဲ တိမ်ကောသွားခဲ့ပါသည်။
လွတ်လပ်ရေးနောက်ပိုင်း ပါလီမန်ခေတ် တိုင်းရင်းသားပါတီများ
ဦးနု၏ ပြောင်းပြန်ဒီမိုကရေစီခေတ်လို့တောင် တင်စားခြင်းခံရသော ၁၉၄၈ မှ ၁၉၆၂ခုနှစ်ကြား (၁၄)အတွင်းတွင် ဒီမိုကရေစီထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို (၃)ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ရာ ပြည်မပါတီကြီး(ဖဆပလ)က တစ်ပါတီစနစ်သဖွယ် အနိုင်လေ့ရှိပါသည်။ ၁၉၅၁-၅၂ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် (၈၅)ရာခိုင်နှုန်း၊ ၁၉၅၆ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် (၅၈)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၁၉၆၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် (၆၃)ရာခိုင်နှုန်းစသည်ဖြင့် အနိုင်ရကာ ပါလီမန်လွှတ်တော်ကို လွှမ်းမိုးထားခဲ့ပါသည်။
သို့သော် ဖဆပလပါတီ၏ ထီးရိပ်အောက်တွင် တိုင်းရင်းသားပါတီ တော်တော်များများလည်း ပေါင်းစည်း(affiliate or proxy) ထားသည်ကို သတိချက်ရပါမည်။ အထူးသဖြင့် ပင်လုံလက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့် ပြည်နယ်/လူမျိုး(၃)ခုဖြစ်သော ချင်း၊ ကချင်၊ ရှမ်းပြည်ကပါတီများဖြစ်သည့် ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက် (KNC)၊ ချင်းကွန်ဂရက်ပါတီ(CCP)၊ ညီညွတ်သော် တောင်တန်းသားများ ကွန်ကရက်(UHPC)နှင့် ကေအင်ယူ(KNU)မှခွဲထွက်သော ကရင်လူငယ်အဖွဲ့(KYO)က ခေါင်းဆောင်များက တည်ထောင်သည့် ကရင်အမျိုးသားများအဖွဲ့ချုပ်(Union Karen League-UKL) စသည်တို့သည် ဖဆပလပါတီ၏ လက်အောက်ခံ တိုင်းရင်းသားပါတီများဖြစ်ကြသည်။
ထို့ကြောင့် ဤကာလအတွင်းတွင် တိုင်းရင်းသားပါတီစစ်စစ်အဖြစ် မားမားမတ်မတ်နှင့် ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်သည့် ပါတီသည် မရှိသလောက်ရှားပါးခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၁ ရွေးကောက်ပွဲတွင် တိုင်းရင်းသားရယ်ဆိုလို့ ရခိုင်ဘက်က တစ်သီးပုဂ္ဂိလရခိုင်ပါလီမန်ဆိုင်ရာအဖွဲ့(IAPG) သာရှိပြီး အမတ်နေရာ (၆)နေရာ ရခဲ့ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ရခိုင်အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့(ANUO)ဟူ၍ နိုင်ငံရေးပါတီအသွင်ဖြင့် ပီပီပြင်ပြင်ရပ်တည်လာပြီး ၁၉၅၆ ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း (၅)နေရာထပ်မံ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယနှင့် တတိယအကြိမ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများတွင် အခြားတိုင်းရင်းသားပါတီများ ဖြစ်ကြသော ရှမ်းပြည်လုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့ချုပ်(ASSO)၊ ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့အစည်း(CNO)၊ မွန်အမျိုးသားတပ်ဦး (MNF)၊ ကယားအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်(KNUL)၊ ညီညွတ်သော ပအိုစ့်အမျိုးသားအဖွဲ့(UNPO) စသည်သည်ဖြင့် တိုင်းရင်းသားပါတီသစ်များ အသီးသီး ပေါ်ပေါက်လာကြပါသည်။
အဘယ်ကြောင့် တိုင်းရင်းသားပါတီများ အင်အားချိနဲ့ခဲ့သလဲ
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော် မြန်မာ့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်တွင် တိုင်းရင်းသားပါတီများသည် အသက်မရှုင်ဘူးဟု ပြောရလောက်အောင် ခေါင်းမထောင်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ ယင်းသို့ဖြစ်ရခြင်းတွင် အဓိက အကြောင်းရင်း (၄)ချက်ကို ဖော်ပြရလျှင် –
(၁) ပါတီနိုင်ငံရေးမှာ နုငယ်သေးခြင်း။ အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း အင်္ဂလိပ်လက်ထက် ကတည်းက ဗမာပြည်မတွင် ၁၉၂၂ မှ ၁၉၄၇ခုနှစ်ကြားမှာ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို (၆)ကြိမ်ခန့် စမ်းသပ်ကျင့်သုံးခဲ့ရာမှာ တောင်တန်းဒေသ(ချင်း၊ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ကယား)တို့တွင် လွတ်လပ်ရေးရသည်အထိ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ လေ့ကျင့် မြင်တွေ့ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့် အတိုချုံးပြောရလျှင် ပြည်မနှင့် တောင်တန်းဒေသများသည် ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံရေးတွင် အတွေ့အကြုံ အလွန်ကွာဟ လျက်ရှိပါသည်။
(၂) တိုင်းရင်းသားများ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံရေးအပေါ် ယုံကြည်မှုနည်းခဲခြင်း။ အားလုံးသိရှိသည့်အတိုင်း ကရင်၊ ကယားနှင့် မွန်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် တော်တော်များများသည် လွတ်လပ်ရေးကာလ ကတည်းကပြင်လျှင် ရွေးကောက်ပွဲများကို အယုံအကြည်သိပ်မရှိဘဲ သပိတ်မှုတ်ကြသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် သူတို့အခွင့်အရေး ရရှိရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းထက် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကို ပိုပြီးအာရုဏ်စိုက် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကေအင်ယူ-၁၉၄၉ခုနှစ်၊ ကရင်နီတပ်မတော်-၁၉၅၇၊ မွန်ပြည်သစ်-၁၉၅၈ခုနှစ် စသည်ဖြင့် အသီးသီး လက်နက်တိုင်တောင်လှန်ရေးလုပ်လာခဲ့ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပင်လုံကို သစ္စာခံ၍ ဖ.ဆ.ပ.လ. ရွေးကောက်ပွဲလမ်းစဉ်ကို အစပိုင်းတွင် ယုံကြည်ခဲ့သော ကချင်နှင့် ရှမ်းသည်ပြင်လျှင် တစ်ပြည်ထောင်စနစ် (unitary system)အောက်က လူများစုအာဏာရှင်ဆန်သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ(ရွေးကောက်ပွဲ)နိုင်ငံရေးကို စိတ်ကုန်လာကြပြီး လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို ရွေးချယ်လာကြသည်။
(၃) ဗမာပါတီအတွင်း အင်အားချိန်ခွန်လျာမးရှိခြင်း။ အကယ်၍ လွတ်လပ်ရေးနှင့်အတူ ဗမာပြည်ကွန်မြိုနစ်ပါတီကသာ တောမခိုခဲ့ဘဲ ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းထဲတွင် အစကတည်းက ၀င်လာခဲ့လျှင် ဖ.ဆ.ပ.လ ပါတီက တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်ဆန်ဆန် ခြေလှယ်နှိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘဲ အပြန်အလှန်ထ်ိန်းကျောင်းမှု အတန်အသင့် ရှိခဲ့မှာဖြစ်သည်။ ယင်းသည် တိုင်းပြည်အတွက် အင်မတန်ကောင်းမွန်စေမှာဖြစ်သည့်အပြင် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများအတွက်လည်း mainstream နိုင်ငံရေးမှာ သူ့အခန်းကဏ္ဍ ပိုမိုမြှင်တင်နိုင်ခဲ့မှာ ဖြစ်သည်။ ၁၉၅၈ခုနှစ် ဖ.ဆ.ပ.လ နှစ်ခြမ်းကွဲမှုကြောင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားပါတီ အခန်းကဏ္ဍ အရေးပါခဲ့သည့် သာဓကရှိခဲ့ပါသည်။
(၄) ၁၉၄၇ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် နိုင်ငံရေးစနစ် ကန့်သတ်ချက်။ ထိုစဉ်တုန်းက ကချင်၊ ရှမ်း၊ ကရင်နှင့် ကယားတို့သာ ပြည်နယ်ရရှိခဲ့ပြီး မွန်နှင့် ရခိုင်က သီးခြားပြည်နယ်(constituent unit) မရရှိုခဲ့ပေ (ချင်းသည် ၀ိသေသတိုင်းအဆင့်ရခဲ့သည်)။ အဆိုးဆုံးမှာ ဖက်ဒရယ်အတုအယောင် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုစနစ် ဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိ ခြေ-ဥကဲ့သို့ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်များနှင့် ၀ိသေသတိုင်းများက ကိုယ့်ဘာသာ ပြည်နယ်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းခွင့်ကိုပိတ်ပြင်ခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့်၁၉၅၁ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အရ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ချင်းဝိသေသတိုင်းက ရွေးချယ်ခဲ့သည့် ဦးဇဟရဲလျန်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်က ရွေးချယ်ခဲ့သည့် ဦးထွန်းမြင့်ကို ဦးနုက ဗဟိုအစိုးရအာဏာဖြင့် ပျယ်ချပြီး သူ့စိတ်ကြိုက်ဖြင့် ခန့်အပ်ခဲ့သည့် သာဓကလည်းရှိခဲ့သည်။ ယင်းသည် တိုင်းရင်းသားပါတီများ လေဖြတ်စေသည့် အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။
မျက်မှေတ်ခေတ် ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံရေးဖြစ်သည့် ၁၉၉၀၊ ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၅ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများကို ပြန်ကြည့်ရအောင်။ တိုင်းရင်းသားပါတီဘယ်လောက်ထိ တိုးတက်မှုရှိသလဲ။ ခြုံငုံသုံးသပ်လျှင် ၁၉၅၀ ၀န်းကျင်တုန်းကထက် တိုင်းရင်းသားပါတီများ ပိုမိုခိုင်မာလာသည်ကိုတွေ့ရသော်လည်း အားကောင်းမောင်းသန်မရှိဘူးဟု ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တည်ထောင်ခဲ့သည့် ဖ.ဆ.ပ.လပါတီက ၁၉၅၀ ၀န်းကျင် ရွေးကောက်ပွဲများကို လွှမ်းမိုးခဲ့လို သူ့သမီးဦးဆောင်သည့် NLD ပါတီက ဒီဘက်ခေတ် ပါတီနိုင်ငံရေးကိုလည်း လွှမ်းမိုးနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် နှိုင်းယှဉ်လိုက်လျှင် တိုင်းရင်းသားပါတီများ၏ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိမှုမှာ တစ်ဖြည်းဖြည်း လျော့ကျလာသည်ဟုပြင် ဆိုနိုင်သည်။ (၁၉၉၀ခုနှစ်တွင် ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် ၁၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ၈ ရာခိုင်နှုန်း)။
အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း တိုင်းရင်းသားပါတီများ အင်အားချိနဲ့နေရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းရင်းသည် အခြေခံဥပဒေနှင့် တည်ဆဲဥပဒေများ၏ ကန့်သတ်ချီနှောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံဥပဒေအရ ပြည်နယ်များ ကိုယ်တိုင်အစိုးရဖွဲ့ခွင့်မပေးခြင်း၊ ဗဟိုနှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲများ ခွဲပြီးမကျင်းပပေးခြင်း၊ သမ္မတစနစ်အသာပေးကျင့်သုံးခြင်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်အခြေမခံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တစ်ချို့တွင် နိုင်ငံရေးနိုးကြားမှုနှင့် အသိပညာပေးမှု အားနည်းခြင်း၊ လူဦးရေအရ တိုင်းရင်းသားဒေသတွင် ရောနှောနေထိုင်မှု တစ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာခြင်း စသည်များလည်း အခက်အခဲရှိပါသည်။
ထို့ပြင် ၂၀၁၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရခဲ့သော တိုင်းရင်းသားပါတီ မဟာမိတ် UNA အဖွဲ့ ၀င်မပြိုင်ခဲ့ခြင်းကလည်း အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် UNA ပြန်ဝင်လာသည့်အခါ ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် အသစ်(သို့မဟုတ် အစားထူး) ပေါ်ပေါက်လာသည့် တိုင်းရင်းသားပါတီများ(NBF အဖွဲ့)နှင့် နေရာထပ်သွားသည့်အတွက် တစ်ချို့ပြည်နယ်သေဒများတွင် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများက ရှုပ်ထွေးလာခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသားပါတီများ ဖောင်းပွသည်ဟု ထောက်ပြဝေဖန်မှု ရှိလာခဲ့သည်။
နိုးထလာသည့် တိုင်းရင်းသားပါတီများ၏ အနာဂတ်
ခြောက်ကြိမ်တိုင်တိုင်ကျင်းပပြီးဖြစ်သည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ တစ်လျောက်လုံးတွင် မရှု့မလှရှုံးနိမ့်ခဲ့မှုကို တိုင်းရင်းသားပြည်သူများက လုံးလောက်သော သင်ခန့်စာ ရယူထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသားပါတီများလည်း သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်အလိုက်နှင့် လူမျိုးအလိုက်ဖြင့် အသီးသီး ပေါင်းစည်းညီညွတ်လာကြပြီ။ ပထမဦးဆုံး ရခိုင် (၂)ပါတီပေါင်းစည်းခဲ့လို့ ၂၀၁၅ခုနှစ်မှာ ရခိုင်ပြည်သူများက တစ်ခဲနက် မဲပေးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ကချင် (၃)ပါတီ၊ ချင်း (၃)ပါတီ၊ ကရင်(၃)ပါတီ၊ ကယား (၂)ပါတီနှင့် မွန် (၂)ပါတီလည်း ပြည်နယ်အလိုက် တစ်ပါတီတည်းအဖြစ် အသီးသီးပေါင်းစည်းလာကြပြီ။ အလားတူ မျိုးနွယ်စု ပါတီတစ်ချို့လည်း အသီးသီးပေါင်းစည်းကြပါပြီ။ ထို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသားပါတီ(၆၀)ကျော်ရှိခဲ့ရာမှ ယခုဆို (၅၃)ပါတီခန့်သာရှိလာပြီ။
မပေါင်းစည်းနိုင်သေးသော တိုင်းရင်းသားပါတီများလည်း မဲဆန္ဒနယ်များ ညှိနှိုင်းပြီး ပူးပေါင်းရန် ပြင်ဆင်ကြပြီ။ တိုင်းရင်းသားပါတီမဟာမိတ်နှစ်ခုဖြစ်သော UNA( ၁၃ပါတီကျော်) နှင့် NBF (၂၀ပါတီကျော်) လည်း ပြည်နယ်အလိုက်ပေါင်းစည်းထားသော တိုင်းရင်းသား(၅)ပါတီနှင့်အတူ အနာဂတ်ရွေးကောက်ပွဲ နှင့် ရွေးကောက်ပွဲအလွန် မြန်မာ့နိုင်ရေးအခင်းအကျင်းတွင် တိုင်းရင်းသားပါတီများ၏ အခန်းကဏ္ဍ ပိုမိုမြင့်မားလာရေးအတွက် မကြာခဏတွေ့ဆုံပြီး မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများ ရှာဖွယ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။
တိုင်းရင်းသား မဲဆန္ဒပြည်သူများလည်း အမျိုးသားရေးအတွက် အမြင့်ဆုံးရေချိန်မြှင့်ဖို့အတွက် နိုးထလာကြသည်ဟု ယူဆပါသည်။ ပြည်မမှာ ဗမာပြည်သူများက သူတို့လိုလားသည့် ဒီမိုကရေစီအတွက် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်မည့် ပါတီကို ဆက်ပြီး မဲပေးကြမှာဖြစ်သလို၊ အလားတူ တိုင်းရင်းသားများကလည်း ဖက်ဒရယ်ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အတွက် မိမိတိုင်းရင်းသားပါတီများကို မဲပေးရတော့မည်ဟု တွက်ဆထားပါသည်။ ထိုမှတဆင့် ရွေးကောက်ပွဲအလွန်အခင်းအကျင်းတွင် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ် အခြေခံ (၂)ခုကို ပေါင်းစပ်ပြီး တိုင်းပြည်တည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ အမတ်ထိုင်ခုံ(၆၆၄)ရှိသည့်အနက် တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်(၇)ခုတွင် အမတ်နေရာ(၂၀၇)ခုရှိသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် တိုင်းရင်းသားပါတီများက (၅၀) နေရာခန့်သာ ရရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် (၃၈၀)ကျော် ရရှိသော ပြည်မပါတီကြီးက အစိုးရဖွဲ့နိုင်ရန်လိုအပ်သော ထက်ဝက်ကျောင်(၃၃၃နေရာ)ပို၍ အမတ်(၅၀)ကျော် အပိုရရှိသောကြောင့် လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် အစိုးရဖွဲနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အထက်ပါပုံတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း တိုင်းရင်းသားပြည်သူများက မိမိနှင့် သက်ဆိုင်သော တိုင်းရင်းသားပါတီအသီးသီးကို ဤတစ်ကြိမ်တွင် အပြည့်အ၀မဟုတ်သည့်တိုင် (၁၅၀)နေရာ အနိုင်ရအောင် မဲပေးပါက တစ်ပါတီတည်းဖြင့် အစိုးရဖွဲ့လို့မရဘဲ တိုင်းရင်းသားပါတီပါမှ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ (coalition government) ဖွဲ့လို့မည့် အခင်းအကျင်းကို ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် တိုင်းရင်းသားပါတီများသည် ဘုရင်တင်မြှောက်သူ (kingmaker) ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး ထိုမှအဆင့် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကို ကျည်ဆံတစ်တောင့်မဖေါက်ပဲ အပေးအယူလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤတစ်ကြိမ် တိုင်းရင်းသားများ ညီညွတ်ဖို့သာလိုပါသည်။
မွနျမာ့ရှေးကောကျပှဲနိုငျငံရေးသမိုငျးကို လလေ့ာသညျ့အခါ အင်ျဂလိပျကိုလိုနီခတျေ ရှေးကောကျပှဲမြားနှငျ့ လှတျလပျရေးနောကျပိုငျး ရှေးကောကျပှဲမြားဟူ၍ (၂)ပိုငျးခှဲရပါမညျ။ ကိုလိုနီခတျေတှငျ ဗမာပွညျမချေါ Burma proper or Ministerial Burma ဗမာ၊ ကရငျ၊ မှနျနှငျ့ ရခိုငျ ဒသေတှငျ ရှေးကောကျပှဲကို (၆) ကွိမျတိုငျတိုငျ လကေ့ငျြ့ ကငျြးပပွုလုပျပေးခဲ့ပါသညျ (၁၉၂၂၊ ၁၉၂၅၊ ၁၉၂၈၊ ၁၉၃၂၊ ၁၉၃၆ နှငျ့ ၂၉၄၇ခုနှဈ)။ သို့သျော တောငျတနျးဒသေ(Frontier Areas) ဖွဈသော ရှမျး၊ ခငျြး၊ ကခငျြနှငျ့ သီးခွားဒသေဖွဈသော ကယားပွညျနယျမြားတှငျမူ ရှေးကောကျပှဲကို လှတျလပျရေးနောကျပိုငျးမှာသာ ကငျြ့သုံးခံစားဖူးပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ပွညျမသားမြားက ရှေးကောကျပှဲကို (၁၂)ကွိမျခနျ့ ဖွတျသနျးခဲ့ပွီးဖွဈရာတှငျ တောငျတနျးသား မြားသညျ (၆)ကွိမျသာ ကွုံတှဖေူ့းသေးပါသညျ (၁၉၅၁၊ ၁၉၅၆၊ ၁၉၆၀၊ ၁၉၉၀၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ခုနှဈ)။ ဆိုရှယျလဈ ပွညျသူ့ကောငျစီခတျေက တဈပါတီရှကေောကျပှဲ (၄)ကွိမျကိုတော့ မထညျ့တှကျပါ။
ထို့ကွောငျ့ တိုငျးရငျးသားပါတီထဲမှာလညျး Ministerial Burma ထဲတှငျ ပါဝငျခဲ့သော ကရငျ၊ ရခိုငျနှငျ့ မှနျတိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြားဆိုလြှငျ လှတျလပျရေးမတိုငျခငျ ၁၉၄၆ ဝနျးကငျြကတညျး သကျဆိုငျရာလူမြိုး အလိုကျ နိုငျငံရေးပါတီ(သို့မဟုတျ)အဖှဲ့အစညျးမြား အသီးသီး ဖှဲ့စညျးတညျထောငျခဲ့ကွပွီး ရှေးကောကျပှဲနိုငျငံရေးမှာ နိုးနိုးကွားကွားရှိကွသညျ့ကိုတှရေ့သညျ။ ကရငျဗဟိုအဖှဲ့ခြုပျ(ကစေီအို)၊ ကရငျလူငယျမြားအစညျးအရုံး(ကဝေိုငျအို)၊ ရခိုငျအမြိုးသားကှနျကရကျနှငျ့ မှနျအမြိုးသားအစညျးအရုံး စသညျဖွငျ့။ ၁၉၄၇ခုနှဈ ဧပွီလ (၉)ရကျတှငျ ကငျြးပခဲ့သော တိုငျးပွုပွညျပွုလှတျတျော ရှေးကောကျပှဲကို ကအေငျယူ(ကစေီအိုအပါဝငျ)က သပိတျမှောတျခဲ့ရာတှငျ ကရငျလူငယျအဖှဲ့(ကဝေိုငျအို) က လကျမခံဘဲ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့သေးသညျ။
ထိုအခြိနျတှငျ တောငျတနျးဒသေမှာ ရှေးကောကျပှဲမရှိသေးပေ။ သို့သျောလညျး ခငျြး၊ ကခငျြ၊ ရှမျးတို့သညျ ၁၉၄၇ခုနှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီ(ရ)ရကျတှငျ တောငျတနျးသားမြားစညျးလုံးညီညှတျရေးအဖှဲ့ကို ပငျလုံမှာ ဖှဲ့စညျးလကျြ လကျတှဲလှုပျရှားလာခဲ့ကွသညျ။ သို့သျော ယငျးသညျ ပငျလုံညီလာခံနှငျ့ လှတျလပျရေးအကွို ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျမှုလောကျသာဖွဈသောကွောငျ့ နောကျပိုငျးမှာ ပျေါပေါကျလာသော ရှေးကောကျပှဲနိုငျငံရေးအထိ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျခွငျးမရှိပဲ တိမျကောသှားခဲ့ပါသညျ။
လှတျလပျရေးနောကျပိုငျး ပါလီမနျခတျေ တိုငျးရငျးသားပါတီမြား
ဦးနု၏ ပွောငျးပွနျဒီမိုကရစေီခတျေလို့တောငျ တငျစားခွငျးခံရသော ၁၉၄၈ မှ ၁၉၆၂ခုနှဈကွား (၁၄)အတှငျးတှငျ ဒီမိုကရစေီထှထှေရှေေးကောကျပှဲကို (၃)ကွိမျကငျြးပခဲ့ရာ ပွညျမပါတီကွီး(ဖဆပလ)က တဈပါတီစနဈသဖှယျ အနိုငျလရှေိ့ပါသညျ။ ၁၉၅၁-၅၂ခုနှဈ ရှေးကောကျပှဲတှငျ (၈၅)ရာခိုငျနှုနျး၊ ၁၉၅၆ခုနှဈ ရှေးကောကျပှဲတှငျ (၅၈)ရာခိုငျနှုနျးနှငျ့ ၁၉၆၀ခုနှဈ ရှေးကောကျပှဲတှငျ (၆၃)ရာခိုငျနှုနျးစသညျဖွငျ့ အနိုငျရကာ ပါလီမနျလှတျတျောကို လှမျးမိုးထားခဲ့ပါသညျ။
သို့သျော ဖဆပလပါတီ၏ ထီးရိပျအောကျတှငျ တိုငျးရငျးသားပါတီ တျောတျောမြားမြားလညျး ပေါငျးစညျး(affiliate or proxy) ထားသညျကို သတိခကျြရပါမညျ။ အထူးသဖွငျ့ ပငျလုံလကျမှတျ ရေးထိုးထားသညျ့ ပွညျနယျ/လူမြိုး(၃)ခုဖွဈသော ခငျြး၊ ကခငျြ၊ ရှမျးပွညျကပါတီမြားဖွဈသညျ့ ကခငျြအမြိုးသားကှနျဂရကျ (KNC)၊ ခငျြးကှနျဂရကျပါတီ(CCP)၊ ညီညှတျသျော တောငျတနျးသားမြား ကှနျကရကျ(UHPC)နှငျ့ ကအေငျယူ(KNU)မှခှဲထှကျသော ကရငျလူငယျအဖှဲ့(KYO)က ခေါငျးဆောငျမြားက တညျထောငျသညျ့ ကရငျအမြိုးသားမြားအဖှဲ့ခြုပျ(Union Karen League-UKL) စသညျတို့သညျ ဖဆပလပါတီ၏ လကျအောကျခံ တိုငျးရငျးသားပါတီမြားဖွဈကွသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ဤကာလအတှငျးတှငျ တိုငျးရငျးသားပါတီစဈစဈအဖွဈ မားမားမတျမတျနှငျ့ ခိုငျခိုငျမာမာရပျတညျသညျ့ ပါတီသညျ မရှိသလောကျရှားပါးခဲ့ပါသညျ။ ၁၉၅၁ ရှေးကောကျပှဲတှငျ တိုငျးရငျးသားရယျဆိုလို့ ရခိုငျဘကျက တဈသီးပုဂ်ဂိလရခိုငျပါလီမနျဆိုငျရာအဖှဲ့(IAPG) သာရှိပွီး အမတျနရော (၆)နရော ရခဲ့ပါသညျ။ နောကျပိုငျးတှငျ ရခိုငျအမြိုးသား ညီညှတျရေးအဖှဲ့(ANUO)ဟူ၍ နိုငျငံရေးပါတီအသှငျဖွငျ့ ပီပီပွငျပွငျရပျတညျလာပွီး ၁၉၅၆ ရှေးကောကျပှဲတှငျလညျး (၅)နရောထပျမံ အနိုငျရရှိခဲ့ပါသညျ။
ဒုတိယနှငျ့ တတိယအကွိမျ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲမြားတှငျ အခွားတိုငျးရငျးသားပါတီမြား ဖွဈကွသော ရှမျးပွညျလုံးဆိုငျရာအဖှဲ့ခြုပျ(ASSO)၊ ခငျြးအမြိုးသားအဖှဲ့အစညျး(CNO)၊ မှနျအမြိုးသားတပျဦး (MNF)၊ ကယားအမြိုးသားညီညှတျရေးအဖှဲ့ခြုပျ(KNUL)၊ ညီညှတျသော ပအိုဈ့အမြိုးသားအဖှဲ့(UNPO) စသညျသညျဖွငျ့ တိုငျးရငျးသားပါတီသဈမြား အသီးသီး ပျေါပေါကျလာကွပါသညျ။
အဘယျကွောငျ့ တိုငျးရငျးသားပါတီမြား အငျအားခြိနဲ့ခဲ့သလဲ
ဆယျစုနှဈတဈခုကြျော မွနျမာ့ပါလီမနျဒီမိုကရစေီခတျေတှငျ တိုငျးရငျးသားပါတီမြားသညျ အသကျမရှုငျဘူးဟု ပွောရလောကျအောငျ ခေါငျးမထောငျနိုငျဖွဈခဲ့ရပါသညျ။ ယငျးသို့ဖွဈရခွငျးတှငျ အဓိက အကွောငျးရငျး (၄)ခကျြကို ဖျောပွရလြှငျ –
(၁) ပါတီနိုငျငံရေးမှာ နုငယျသေးခွငျး။ အထကျတှငျ ဖျောပွခဲ့သညျ့အတိုငျး အင်ျဂလိပျလကျထကျ ကတညျးက ဗမာပွညျမတှငျ ၁၉၂၂ မှ ၁၉၄၇ခုနှဈကွားမှာ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကို (၆)ကွိမျခနျ့ စမျးသပျကငျြ့သုံးခဲ့ရာမှာ တောငျတနျးဒသေ(ခငျြး၊ ကခငျြ၊ ရှမျး၊ ကယား)တို့တှငျ လှတျလပျရေးရသညျအထိ တဈကွိမျတဈခါမှ လကေ့ငျြ့ မွငျတှခေဲ့ခွငျးမရှိခဲ့ပေ။ ထို့ကွောငျ့ အတိုခြုံးပွောရလြှငျ ပွညျမနှငျ့ တောငျတနျးဒသေမြားသညျ ရှေးကောကျပှဲနိုငျငံရေးတှငျ အတှအေ့ကွုံ အလှနျကှာဟ လကျြရှိပါသညျ။
(၂) တိုငျးရငျးသားမြား ရှေးကောကျပှဲနိုငျငံရေးအပျေါ ယုံကွညျမှုနညျးခဲခွငျး။ အားလုံးသိရှိသညျ့အတိုငျး ကရငျ၊ ကယားနှငျ့ မှနျအမြိုးသား နိုငျငံရေးခေါငျးဆောငျ တျောတျောမြားမြားသညျ လှတျလပျရေးကာလ ကတညျးကပွငျလြှငျ ရှေးကောကျပှဲမြားကို အယုံအကွညျသိပျမရှိဘဲ သပိတျမှုတျကွသညျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ သူတို့အခှငျ့အရေး ရရှိရေးအတှကျ ရှေးကောကျပှဲလမျးကွောငျးထကျ လကျနကျကိုငျတျောလှနျရေးလမျးစဉျကို ပိုပွီးအာရုဏျစိုကျ ရှေးခယျြခဲ့ကွသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ကအေငျယူ-၁၉၄၉ခုနှဈ၊ ကရငျနီတပျမတျော-၁၉၅၇၊ မှနျပွညျသဈ-၁၉၅၈ခုနှဈ စသညျဖွငျ့အသီးသီး လကျနကျတိုငျတောငျလှနျရေးလုပျလာခဲ့ကွသညျ။ နောကျပိုငျးတှငျ ပငျလုံကို သစ်စာခံ၍ ဖ.ဆ.ပ.လ. ရှေးကောကျပှဲလမျးစဉျကို အစပိုငျးတှငျ ယုံကွညျခဲ့သော ကခငျြနှငျ့ ရှမျးသညျပွငျလြှငျ တဈပွညျထောငျစနဈ (unitary system)အောကျက လူမြားစုအာဏာရှငျဆနျသညျ့ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီ(ရှေးကောကျပှဲ)နိုငျငံရေးကို စိတျကုနျလာကွပွီး လကျနကျကိုငျလမျးစဉျကို ရှေးခယျြလာကွသညျ။
(၃) ဗမာပါတီအတှငျး အငျအားခြိနျခှနျလြာမးရှိခွငျး။ အကယျ၍ လှတျလပျရေးနှငျ့အတူ ဗမာပွညျကှနျမွိုနဈပါတီကသာ တောမခိုခဲ့ဘဲ ရှေးကောကျပှဲလမျးကွောငျးထဲတှငျ အစကတညျးက ဝငျလာခဲ့လြှငျ ဖ.ဆ.ပ.လ ပါတီက တဈပါတီအာဏာရှငျစနဈဆနျဆနျ ခွလှေယျနှိုငျခဲ့မှာမဟုတျဘဲ အပွနျအလှနျထိနျးကြောငျးမှု အတနျအသငျ့ ရှိခဲ့မှာဖွဈသညျ။ ယငျးသညျ တိုငျးပွညျအတှကျ အငျမတနျကောငျးမှနျစမှောဖွဈသညျ့အပွငျ တိုငျးရငျးသားလူနညျးစုမြားအတှကျလညျး mainstream နိုငျငံရေးမှာ သူ့အခနျးကဏ်ဍ ပိုမိုမွှငျတငျနိုငျခဲ့မှာ ဖွဈသညျ။ ၁၉၅၈ခုနှဈ ဖ.ဆ.ပ.လ နှဈခွမျးကှဲမှုကွောငျ့ ရခိုငျတိုငျးရငျးသားပါတီ အခနျးကဏ်ဍ အရေးပါခဲ့သညျ့ သာဓကရှိခဲ့ပါသညျ။
(၄) ၁၉၄၇ဖှဲ့စညျးပုံနှငျ့ နိုငျငံရေးစနဈ ကနျ့သတျခကျြ။ ထိုစဉျတုနျးက ကခငျြ၊ ရှမျး၊ ကရငျနှငျ့ ကယားတို့သာ ပွညျနယျရရှိခဲ့ပွီး မှနျနှငျ့ ရခိုငျက သီးခွားပွညျနယျ(constituent unit) မရရှိုခဲ့ပေ (ခငျြးသညျ ဝိသသေတိုငျးအဆငျ့ရခဲ့သညျ)။ အဆိုးဆုံးမှာ ဖကျဒရယျအတုအယောငျ ဗဟိုခြုပျကိုငျမှုစနဈ ဖွဈခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ လကျရှိ ခွေ-ဥကဲ့သို့ သကျဆိုငျရာ ပွညျနယျမြားနှငျ့ ဝိသသေတိုငျးမြားက ကိုယျ့ဘာသာ ပွညျနယျအစိုးရ ဖှဲ့စညျးခှငျ့ကိုပိတျပွငျခဲ့ပေ။ ထို့ကွောငျ့၁၉၅၁ခုနှဈ ရှေးကောကျပှဲရလဒျအရ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျအဖွဈ ခငျြးဝိသသေတိုငျးက ရှေးခယျြခဲ့သညျ့ ဦးဇဟရဲလနျြနှငျ့ ရှမျးပွညျနယျက ရှေးခယျြခဲ့သညျ့ ဦးထှနျးမွငျ့ကို ဦးနုက ဗဟိုအစိုးရအာဏာဖွငျ့ ပယျြခပြွီး သူ့စိတျကွိုကျဖွငျ့ ခနျ့အပျခဲ့သညျ့ သာဓကလညျးရှိခဲ့သညျ။ ယငျးသညျ တိုငျးရငျးသားပါတီမြား လဖွေတျစသေညျ့ အခကျြတဈခကျြဖွဈသညျ။
မကျြမှတျေခတျေ ရှေးကောကျပှဲနိုငျငံရေးဖွဈသညျ့ ၁၉၉၀၊ ၂၀၁၀ နှငျ့ ၂၀၁၅ခုနှဈ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲမြားကို ပွနျကွညျ့ရအောငျ။ တိုငျးရငျးသားပါတီဘယျလောကျထိ တိုးတကျမှုရှိသလဲ။ ခွုံငုံသုံးသပျလြှငျ ၁၉၅၀ ဝနျးကငျြတုနျးကထကျ တိုငျးရငျးသားပါတီမြား ပိုမိုခိုငျမာလာသညျကိုတှရေ့သျောလညျး အားကောငျးမောငျးသနျမရှိဘူးဟု ကောကျခကျြခနြိုငျသညျ။ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး တညျထောငျခဲ့သညျ့ ဖ.ဆ.ပ.လပါတီက ၁၉၅၀ ဝနျးကငျြ ရှေးကောကျပှဲမြားကို လှမျးမိုးခဲ့လို သူ့သမီးဦးဆောငျသညျ့ NLD ပါတီက ဒီဘကျခတျေ ပါတီနိုငျငံရေးကိုလညျး လှမျးမိုးနဆေဲ ဖွဈပါသညျ။ ရာခိုငျနှုနျးအားဖွငျ့ နှိုငျးယှဉျလိုကျလြှငျ တိုငျးရငျးသားပါတီမြား၏ ရှေးကောကျပှဲအနိုငျရရှိမှုမှာ တဈဖွညျးဖွညျး လြော့ကလြာသညျဟုပွငျ ဆိုနိုငျသညျ။ (၁၉၉၀ခုနှဈတှငျ ၁၃ ရာခိုငျနှုနျး၊ ၂၀၁၀ခုနှဈတှငျ ၁၁ ရာခိုငျနှုနျး၊ ၂၀၁၅ခုနှဈတှငျ ၈ ရာခိုငျနှုနျး)။
အထကျတှငျ ဖျောပွခဲ့သညျ့အတိုငျး တိုငျးရငျးသားပါတီမြား အငျအားခြိနဲ့နရေခွငျး၏ အဓိက အကွောငျးရငျးသညျ အခွခေံဥပဒနှေငျ့ တညျဆဲဥပဒမြေား၏ ကနျ့သတျခြီနှောငျခွငျးကွောငျ့ဖွဈပါသညျ။ အခွခေံဥပဒအေရ ပွညျနယျမြား ကိုယျတိုငျအစိုးရဖှဲ့ခှငျ့မပေးခွငျး၊ ဗဟိုနှငျ့ပွညျနယျလှတျတျော ရှေးကောကျပှဲမြား ခှဲပွီးမကငျြးပပေးခွငျး၊ သမ်မတစနဈအသာပေးကငျြ့သုံးခွငျး၊ တဈနညျးအားဖွငျ့ ဖကျဒရယျစနဈအခွမေခံခွငျးကွောငျ့ဖွဈပါသညျ။ တိုငျးရငျးသားပွညျနယျတဈခြို့တှငျ နိုငျငံရေးနိုးကွားမှုနှငျ့ အသိပညာပေးမှု အားနညျးခွငျး၊ လူဦးရအေရ တိုငျးရငျးသားဒသေတှငျ ရောနှောနထေိုငျမှု တဈဖွညျးဖွညျးမွငျ့တကျလာခွငျး စသညျမြားလညျး အခကျအခဲရှိပါသညျ။
ထို့ပွငျ ၂၀၁၀ခုနှဈ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ၁၉၉၀ ရှေးကောကျပှဲအနိုငျရခဲ့သော တိုငျးရငျးသားပါတီ မဟာမိတျ UNA အဖှဲ့ ဝငျမပွိုငျခဲ့ခွငျးကလညျး အခကျြတဈခကျြဖွဈသညျ။ ၂၀၁၅ခုနှဈတှငျ UNA ပွနျဝငျလာသညျ့အခါ ၂၀၁၀ခုနှဈတှငျ အသဈ(သို့မဟုတျ အစားထူး) ပျေါပေါကျလာသညျ့ တိုငျးရငျးသားပါတီမြား(NBF အဖှဲ့)နှငျ့ နရောထပျသှားသညျ့အတှကျ တဈခြို့ပွညျနယျသဒေမြားတှငျ မဲဆန်ဒရှငျပွညျသူမြားက ရှုပျထှေးလာခဲ့သညျ။ တိုငျးရငျးသားပါတီမြား ဖောငျးပှသညျဟု ထောကျပွဝဖေနျမှု ရှိလာခဲ့သညျ။
နိုးထလာသညျ့ တိုငျးရငျးသားပါတီမြား၏ အနာဂတျ
ခွောကျကွိမျတိုငျတိုငျကငျြးပပွီးဖွဈသညျ့ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲ တဈလြောကျလုံးတှငျ မရှု့မလှရှုံးနိမျ့ခဲ့မှုကို တိုငျးရငျးသားပွညျသူမြားက လုံးလောကျသော သငျခနျ့စာ ရယူထားပွီးဖွဈပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ တိုငျးရငျးသားပါတီမြားလညျး သကျဆိုငျရာ ပွညယျမအလိုကျနှငျ့ လူမြိုးအလိုကျဖွငျ့ အသီးသီး ပေါငျးစညျးညီညှတျလာကွပွီ။ ပထမဦးဆုံး ရခိုငျ (၂)ပါတီပေါငျးစညျးခဲ့လို့ ၂၀၁၅ခုနှဈမှာ ရခိုငျပွညျသူမြားက တဈခဲနကျ မဲပေးခဲ့ကွသညျ။ ထို့နောကျ ကခငျြ (၃)ပါတီ၊ ခငျြး (၃)ပါတီ၊ ကရငျ(၃)ပါတီ၊ ကယား (၂)ပါတီနှငျ့ မှနျ (၂)ပါတီလညျး ပွညျနယျအလိုကျ တဈပါတီတညျးအဖွဈ အသီးသီးပေါငျးစညျးလာကွပွီ။ အလားတူ မြိုးနှယျစု ပါတီတဈခြို့လညျး အသီးသီးပေါငျးစညျးကွပါပွီ။ ထို့ကွောငျ့ တိုငျးရငျးသားပါတီ(၆၀)ကြျောရှိခဲ့ရာမှ ယခုဆို (၅၃)ပါတီခနျ့သာရှိလာပွီ။
မပေါငျးစညျးနိုငျသေးသော တိုငျးရငျးသားပါတီမြားလညျး မဲဆန်ဒနယျမြား ညှိနှိုငျးပွီး ပူးပေါငျးရနျ ပွငျဆငျကွပွီ။ တိုငျးရငျးသားပါတီမဟာမိတျနှဈခုဖွဈသော UNA( ၁၃ပါတီကြျော) နှငျ့ NBF (၂၀ပါတီကြျော) လညျး ပွညျနယျအလိုကျပေါငျးစညျးထားသော တိုငျးရငျးသား(၅)ပါတီနှငျ့အတူ အနာဂတျရှေးကောကျပှဲ နှငျ့ ရှေးကောကျပှဲအလှနျ မွနျမာ့နိုငျရေးအခငျးအကငျြးတှငျ တိုငျးရငျးသားပါတီမြား၏ အခနျးကဏ်ဍ ပိုမိုမွငျ့မားလာရေးအတှကျ မကွာခဏတှဆေုံ့ပွီး မဟာဗြူဟာမွောကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ နညျးလမျးမြား ရှာဖှယျနဆေဲဖွဈပါသညျ။
တိုငျးရငျးသား မဲဆန်ဒပွညျသူမြားလညျး အမြိုးသားရေးအတှကျ အမွငျ့ဆုံးရခြေိနျမွှငျ့ဖို့အတှကျ နိုးထလာကွသညျဟု ယူဆပါသညျ။ ပွညျမမှာ ဗမာပွညျသူမြားက သူတို့လိုလားသညျ့ ဒီမိုကရစေီအတှကျ အကောငျးဆုံးစှမျးဆောငျနိုငျမညျ့ ပါတီကို ဆကျပွီး မဲပေးကွမှာဖွဈသလို၊ အလားတူ တိုငျးရငျးသားမြားကလညျး ဖကျဒရယျကိုယျပိုငျပွဌာနျးခှငျ့အတှကျ မိမိတိုငျးရငျးသားပါတီမြားကို မဲပေးရတော့မညျဟု တှကျဆထားပါသညျ။ ထိုမှတဆငျ့ ရှေးကောကျပှဲအလှနျအခငျးအကငျြးတှငျ ဒီမိုကရစေီနှငျ့ ဖကျဒရယျ အခွခေံ (၂)ခုကို ပေါငျးစပျပွီး တိုငျးပွညျတညျဆောကျမှာဖွဈပါသညျ။
ပွညျထောငျစုလှတျတျောမှာ အမတျထိုငျခုံ(၆၆၄)ရှိသညျ့အနကျ တိုငျးရငျးသားပွညျနယျ(၇)ခုတှငျ အမတျနရော(၂၀၇)ခုရှိသညျ။ ၂၀၁၅ခုနှဈတှငျ တိုငျးရငျးသားပါတီမြားက (၅၀) နရောခနျ့သာ ရရှိခဲ့သညျ။ ထို့ကွောငျ့ (၃၈၀)ကြျော ရရှိသော ပွညျမပါတီကွီးက အစိုးရဖှဲ့နိုငျရနျလိုအပျသော ထကျဝကျကြောငျ(၃၃၃နရော)ပို၍ အမတျ(၅၀)ကြျော အပိုရရှိသောကွောငျ့ လှတျလှတျကြှတျကြှတျ အစိုးရဖှဲနိုငျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ အထကျပါပုံတှငျ ဖျောပွထားသညျ့အတိုငျး တိုငျးရငျးသားပွညျသူမြားက မိမိနှငျ့ သကျဆိုငျသော တိုငျးရငျးသားပါတီအသီးသီးကို ဤတဈကွိမျတှငျ အပွညျ့အဝမဟုတျသညျ့တိုငျ (၁၅၀)နရော အနိုငျရအောငျ မဲပေးပါက တဈပါတီတညျးဖွငျ့ အစိုးရဖှဲ့လို့မရဘဲ တိုငျးရငျးသားပါတီပါမှ ညှနျ့ပေါငျးအစိုးရ (coalition government) ဖှဲ့လို့မညျ့ အခငျးအကငျြးကို ဖနျတီးနိုငျမညျဖွဈသညျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ တိုငျးရငျးသားပါတီမြားသညျ ဘုရငျတငျမွှောကျသူ (kingmaker) ဖွဈလာမှာဖွဈပွီး ထိုမှအဆငျ့ တိုငျးရငျးသားအခှငျ့အရေးမြားကို ကညျြဆံတဈတောငျ့မဖေါကျပဲ အပေးအယူလုပျနိုငျမှာ ဖွဈပါသညျ။ ဤတဈကွိမျ တိုငျးရငျးသားမြား ညီညှတျဖို့သာလိုပါသညျ။